Akhri Wararka Wargeyska Warsugan ee Cadadkii 196aad kana soo baxay Hargeysa 20.09.2016 | Warsugan News
Home Wararka Akhri Wararka Wargeyska Warsugan ee Cadadkii 196aad kana soo baxay Hargeysa 20.09.2016
Akhri Wararka Wargeyska Warsugan ee Cadadkii 196aad kana soo baxay Hargeysa 20.09.2016
Dawladda Somaliland Oo Iclaamisay Inay Kharashka Doorashada Bixin Karto Haddii Qaadhaan Bixiyeyaashu Maalgalin Waayaan
Hargeysa(Warsugan) Dawladda Somaliland ayaa markii u horaysay sheegtay inay ka maarmi karto caawimada dawladdaha isugu yeedha beesha Caalamka, haddii ay go’aansadaan inay maalgalin waayaan doorashada Wakiillada Somaliland. dawladda ayaa sheegtay in bulshada Somaliland iyo xukumadda oo iskaashaday bixin karaan dhaqaalaha beesha caalamku ku caawiso doorashooyinka Somaliland.
Dhawaaqan ayaa ka dambeeyay markii beesha caalamku soo jeedisay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ka noqdo go’aanka uu dib ugu dhigayo doorashada Wakiillada. Waxay sheegeen haddii go’aankaasi laga noqon waayo inaanay wax kharash ah ku bixin doonin doorashada wakiillada, qorshahooduna yahay inay maalgaliyaan kaliya haddii ay qabsoomayso March, 2017-ka.
Wasiirka arrimaha dibadda Dr Sacad Cali Shire oo shalay u waramayay Wariye Badri Koosar oo ka tirsan telefishanka Star ayaa arrintaasi iclaamiyay “Haddiiba ay dhacdo in caalamku inaga caawin waayo doorashada labaad( doorashada Wakiilada) sida ay yidhaahdeen, inkasta oo aan wali qabo inay inaga caawin doonaan, haddana waa wax aynu inagu ku filan nahay,” ayuu yidhi Wasiir Sacad.
Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi “ Sida aynu ognahay Miisaaniyadda Somaliland waxa weeye ilaa saddex boqol oo milyan oo doolar, kharashka doorashada ku baxayaa lagama yaabo inuu ka bato lix ilaa 8 milyan oo doolar, markaa waynu bixin karnaa, xataa haddaynaan Kharashka dawladda ka goyn dadkeena ayaaba bixin kara ba, wax sidaas u sii weyn oo buuran runtii maaha, mana aha inaynu ka cabsanno ee waynu ku guulaysan karnaa, markaa haddii la inaga caawiyana wanaagsan haddii kalena inagaa qabsan karna” ayuu yidhi Wasiirku.
Geesta kale wasiirka arrimaha dibadu wuxuu sheegay in doorashada madaxweynuhu dhici doonto wakhtigeeda sida qorshaysan, sidoo kalena ta Wakiilladu ku qabsoomayso wakhtiga loo qorsheeyo, isagoo meesha ka saaray cabsida laga qabo dib u dhac dambe.Waxa kale oo uu difaacay go’aanka madaxweynuhu ku kala qaaday doorashadda wakiillada iyo ta madaxtooyada, isagoo sheegay in loo cuskaday qodobo dastuuri ah, duruufo iyo kalsoonidii hoggaamiyeyaasha saddexda xisbi madaxweynaha ugu gudbiyeen inuu ka talo bixiyo saamiq aybsiga wakiillada, islamarkaana talo kasta oo uu soo jeediyo ay la qaadan doonaan.
Maayarka Burco Oo Wacad Ku Maray inay Maxakamadda Ku Kala Calaf Qaadayaan Xildhibaanno Eedeeyay Iyo Booliska Oo Soo Qabtay 4 Eedaysane
Hargeysa(Warsugan)Masuuliyiinta Gobolka Togdheer iyo Degmada Burco oo ay weheliyaan guddida ammaanka ayaa shalay shaaciyay inay soo qabteen 4 nin oo degaanka Gorgorka ku dilay marxuum Marxuum Axmed Hurre, kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay ciidamo ay hoggaaminayaan Gashaanle dhexe Guutaale iyo Xildhibaan Bidhi ku raad joogeen kuna guulaysteen soo qabashadooda.
Shir ay shalay wada jir u qabteen Badhasaabka gobolka Togdheer Mudane Qabo, maayarka Burco Mudane Maxamed Muraad, Xildhibaan Bidhi, guddida nabad galyada iyo saraakiisha ciidamadu ayaa lagu sheegay in afartaas nin ku eedaysan yihiin dilka dhawaan dhacay, islamarkaana la baadhi doono siday hawshaasi ugu kala lug lahaayeen.
Guddoomiyaha golaha degaanka Burco Maxamed Muraad, ayaa sheegay in xildhibaanno golihiisa degaanka ka mid ahi ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa dalka loo gaystay Marxuum Axmed Hurre, waxaanu sheegay inaanu arrintaas shaqo ku lahayn nimanka xildhibaannada ahna uu dacwadooda xeer ilaalinta u gudbiyay kuwaasi oo uu si adag u sheegay inay caddaaladda horteeda iskula daalayaan.
“Alle ha u naxariisto Marxuum Axmed Hurre, ehelkiisana Samir iyo iimaan ha ka siiyo. Haddii masiibadan oo kale dhacdo faraaro badan bay yeelataa oo meelo badan ayaa laga yaabaa in xaq darro loogu kufo oo tuhun badani galo, markaa masiibo kasta intay leeg tahay ayay yeelanaysaa faraqyo culayskooda leh, oo laga yaabo in dadka qaarba wax yidhaa oo qaar Tv-yada ka hadlaan” ayuu yidhi Mudane Muraad oo sheegay inay hawsha ugu culus ee soo qabashada eedaysaneyaasha lahayd dawladda hoose ee Burco.
Isagoo sii hadlaya waxa uu tilmaamay in sababta ugu weyn ee uu uga hawl galay dilkaasi ahayd sidii ammaanka loo sugi lahaa “Laba arrimood baa ugu weynaa sababta aan isku xilsaaray; ta koobaad waxaa degmada ka dhacay inaanu soo afjaro, iyo inaan dadka aan maskaxda qaangaadhka ka ahayn ee laga yaabo inay falkaas aniga ii tuhmeen idaacadana ka hadleen aan soo afjaro oo inaan ka dambeeyay iyo inaan wax ka qabanayo aan kala caddeeyo,” ayuu yidhi maayarku.
Wuxuu tilmaamay in xildhibaanno la xidhiidhiyeen masuuliyadda dilka dhacay “Arrintaas niman badan oo xildhibaanno ah ayaa ka hadlay, Guddoomiye(Qabo) dacwadooda xeer ilaalinta ayaan u gudbiyay, ogaysiinteedana waaniga hadda kula socodsiinaya Xildhibaanka ka hadlay TV-ga ee yidhi Maayarka ka dambeeyay. Hay’addahaa sharciga ayaanu iskula daalaynaa, adiga iyo wasiirka arrimaha gudahana waan idin ogaysiinayaa, kamana dambayno dhiig qof bani’aadam ah, dhiigna waxaa iigu dambeysay xabaddii aan afarta sanno ridayay ee SNM, dagaalkii Habar-habarta ee Burco ka dhacayna kama qayb galin, maantana anigoo umadda masuul ka ah mid yar oo hoose hurin maayo,” ayuu yidhi Muraad.
Isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in dadka caadiga ah uu ugu dulqaadanayo ku sheekaysiga eeda loo jeediyay balse aanu ugu dulqaadanayn xildhibaanka arrintaasi ka hadlay “Dadka aan qaangaadhka ahayni waxaa ha ku sheekaysteen laakiin, ragga ila darajada ah ee waxaa ku hadlay sharciga ayaanu ku kala hadhaynaa,” ayuu yidhi.
Guddoomiyaha Guurtida “ Doorashada La Kala Qaaday Marka La I Hor Keeno Ayaan Ka Arriminayaa.”
Hargeysa(Warsugan) Guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland, mudane Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa ka gaws adaygay inuu talo ka dhiibto doorashada wakiillada ee dib loo dhigay, taas oo la filayo in dhawaan loo gudbiyo golaha guurtida oo muddo kordhin u samaynaya golaha wakiillada. Waxa uu sheegay inaanu ka hordhacayn, islamarkaana marka golihiisa la keeno uu ka arriminayo.
Isagoo ka hadlaya arragtidiisa waxa uu yidhi “Hadda iima joogto, way I hor iman doontaa, markaas ayaan ka talin doonaa,” ayuu yidhi guddoomiye Saleebaan, iyadoo saxaafaddu sii waydisay sida uu u arkana wuxuu ku jawaabay “ wakhti ha iska lumin, wuu I hor iman go’aankeedu, markaas baan ka talin ee iga daa waxaad walaaqayso, dhure dheer soo qaado dharigayga guntiisa gaadhi mayside,” ayuu yidhi mudane Saleebaan.
Guddoomiyaha Guurtida ayaa sidoo kale wax laga waydiiyay beesha caalamka oo madaxweynaha ugu baaqday inuu ka noqdo kala qaadista doorashada wakiillada iyo Madaxtooyada “Waar aniga caalamkaas afka ha ii galine Somaliland baa nala yidhaahda, Somaliland dan bay leedahay, danteedana iyadaa og,” ayuu yidhi Guddoomiye Saleebaan.
Waddamada isku magacaabay beesha caalamka ee Somaliland ka taageera doorashooyinka ayaa dhawaan luuqad adag kula hadlay madaxweyne Siilaanyo, kuna booriyay inuu ka noqdo doorashada wakiillada ee uu dib u dhigay wakhti aan cayinayn.Waxay sheegeen inay maalgalin culus ku sameeyaan doorashada iyo hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland islamarkaana aanay u baahnayn in la curyaamiyo dadaalkooda.Arrintan ayaa soo bandhigtay aragti ah in Somaliland isku filaansho ka gaadho dhinaca doorashada islamarkaana ay qorshayso dhaqaalaha ku baxaya si ay uga maaranto dawladdaha shisheeye.
Xukumadda Oo Xisbiga Waddani Ku Eedaysay Inuu Beesha Caalamka U Gudbiyay Qoraallo
Ka Dhan Ah Madaxweynaha Somaliland
Hargeysa(Warsugan)Xukumadda Madaxweyne Siilaanyo ayaa iska fogaysay eedo xisbiga mucaaradka ah ee Waddani u jeediyay oo ku saabsan dib u dhigista doorashada wakiillada Somaliland. xisbiga Waddani ayaa si kulul uga soo horjeesta go’aanka madaxweynuhu ku gaadhay in dib loo dhigo doorashada Wakiillada, inkasta oo aanu wali guddoomiye Cirro go’aan cad ka qaadan. Waddani wuxuu go’aankaasi ku tilmaamay mid u muuqda in masuuliyiinta xukumaddu ku dhiiri galisay madaxweynaha balse aanu iskii u qaadan, hase ahaatee xukumadda ayaa arrinaasi si kulul u beenisay.
Shukri Xariir Ismaaciilwasiir kuxigeenka warfaafinta oo shalay shir jaraa’id qabatay ayaa ku dooday in hoggaamiyaha Waddani qayb ka ahaa kulamaddii lagu darsay arrinta saami qaybsiga “Xisbiga Waddani waxay yidhaahdeen “Madaxweynaha miyaa la hoos dhigay,” waxaan leeyahay mayee Waddaniyow idinkaa hawaawi kacay, waxaa fadhideen shirkii xisbiyadu kaga hadlayeen saami qaybsiga, waxaa idinkoo xisbiyada ah isla garateen in madaxweynaha arrintaas loo daayo, inuu ka taliyo, in madaxweynuhu wuxuu soo saaro ku wada kalsoontihiin oo kuwada raaci doontaan. Madaxweynuhu waa siyaasi ruug caddaa ah oo wuxuu gartay in la isku joojiyo, Somaliland la odhan maayo la isu joojin maayee, waxaanu leenahay Somaliland way isu joojinaysaa, wax bay wada qabsanaysaa oo way wada tashanaysaa ayaynu leenahay, kala tagi mayno ee waynu iska lulanaynaa, waxaynu leenahay kala tagi mayno ee qof walba halkiisa ayaa lagu qancinayaa, madaxweynuhuna tuu ka duulay waa taas
“Waxaa la yaab leh oo aad iyo aad iyaduna fajac u ah, Haddii aynu halkan kuwada hadalno oo aynu bulshada reer Somaliland nahay iyo haddaynu nahay madaxda Somaliland ee taladu ka go’aysay ee masiirka umadda gacanta ku haya ee Xukumad leh ee Xisbiyo leh ee Komishan leh oo aynu wada hadalnay oo umaddeena masiirkeeda isla meel dhignay, haddana inaynu waraaqo kala qorno oo nidhaa kumaanan jirin waa wax laga xishoodo. Bulshadu inaga yeeli mayso, xukumaddana ka yeeli mayso, xisbiyadana ka yeeli mayso oo dadku caqligooda ayay qabaan. Waar waad wada fadhiisateen idinkoo xisbiyadii ah oo go’aan baad gaadheen, haddana waraaqo ayaad qoraysaan oo waxaad leedihiin shisheeyow na soo gaadha. Shisheeyuhu ma waddankeena ayuu inala leeyahay?Ma waxbuu kuu hagaajin karaa? Ma qof gurigiisa hagaajisan kari waayay ayay cidi u hagaajisaa? Waxaan leeyahay arrintaasi waa qadaf,” ayay tidhi Marwo Shukri.
Ugu dambeyna waxay difaacday go’aanka madaxweynuhu ku kala qaaday doorashada wakiillada iyo madaxtooyada “Madaxweynaha waanu ku hambalyaynaynaa go’aankaas uu qaatay umadda Somaliland-na way ku hambalyaynaysaa, ninka kaas diidana waxaan u malayn inuu jiritaanka Somaliland diidi doono oo madmadow galin doono oo odhan doono malaha barigii ayay khalad ahayd,” ayay tidhi Marwo Shukri.
Madaxweynaha Somaliland ayaa had iyo jeer go’aammada ku saabsan mustaqbalka doorashada waxa uu qayb ka siiyaa hoggaamiyeyaasha asxaabta oo ka talo bixiya, hase ahaatee arrinta saami qaybsiga ayay saddexda hoggaamiye xisbi ku guul daraystaan inay ka tala bixiyaan, waxaanay ku soo celiyeen madaxweynaha oo ay kalsooni buuxda siiyeen.
Wasaaradda Waxbarashada Oo Digniin U Dirtay Macalimiinta iyo Ardayda 19 Dugsi Oo Muddo Xidhan
Ceerigaabo(Warsugan) Wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa ardayda iyo macalimiinta 19 iskuul oo hoos taga degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag, kuwaasi oo ay saamaysay shaqaaqo laba beelood ku dhexmartay degaannadaasi. Masuuliyiintu waxay macalimiinta iyo ardayda uga digeen inay ku milmaan ismaan dhaafka beelaha walaalaha ah u dhexeeya.
Aniis Saalax Xaaji Xasan, isu duwaha gobolka Sanaag ayaa sheegay inay talaabo cad ka qaadi doonaan macalimiinta iyo ardayda 19-ka dugsi ee xidhan haddii ay caddaato inay qayb ka yihiin shaqaaqada labada beelood “ Wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag, waxaanu aad uga xunnahay iyadoo ay maanta naga xidhan yihiin 19 dugsi oo degmada Sanaag hoos taga oo ay saamaysay shaqaaqadii dhacday. Intii dhimatay iyo inta dhaawacaba Alle ayaanu u baryaynaa inuu dadka Samir iyo iimaan kala siiyo,” ayuu yidhi isu duwaha.
Isagoo sii hadlaya waxa uu yidhi “Waxaanu halkan ka ogaysiinaynaa macalimiinta iyo ardaydaba inaanay ku dhex qasmin falalka noocaas ah, sababtoo ah rabshad kasta waxaa ka dambeysa waa la heshiiyay, maadaama oo la heshiin doono waxaanu faraynaa macalimiinta inaanay ka hawl galin rabshadahaas,”ayuu yidhi isu duwuhu.
Waxa uu sheegay in degmada Ceelafweyn ay hoos tagaan 31 iskuul balse ay hadda furmeen 9 iskuul kadib markii la darsay arrimaha ammaanka “Markaanu arrimaha nabad galyada hubsanay ee badhasaabka la tashanay degmada Ceelafweyn oo 31 dugsi ahayd waxaa noo shaqeeyay 9 dugsi, intii kale waxay u xidhan yihiin rabshadda dhacday,” ayuu yidhi isagoo intaasi raaciyay in guud ahaan macalimiinta gobolka la kormeeri doono sida ay hawshooda u wataan, ciddii shaqadeeda ka maqana aanay shaqayn doonin.
Waxa kale oo uu sheegay in macalimiinta dugsiyada xeebaha ku yaalla uu ka xanniban yahay mushaharkii, sidaasi darteedna ay hay’addaha waxbarashada kala shaqeeya ugu baaqayaan in la fuliyo ballamo loo sameeyay macalimiinta, isagoo ammaanay hay’adda Care oo uu sheegay inay si fiican ula shaqayso.
Axmed Yuusuf YaasiinOo Habsanka Xeerka Saami Qaybsiga Dusha U Saaray Wakiillada iyo Xukumaddihii Kala Dambeeyay
Hargeysa(Warsugan) Madaxweyne xigeenkii hore ee Somaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin, ayaa sheegay in dawladdoodii UDUB, Xukumaddan Kulmiye iyo golaha wakiillada ee hadda fadhiyaa ka gaabiyeen wax ka qabashada cabashada saami qaybsiga golaha Wakiillada. Waxa kale oo uu tilmaamay in diwaangalin Qaran oo la sameeyaa xallinayso saami qaybsiga taas oo aan hore u qabsoomin haddana wakhti badan qaadan karta.
Madaxweyne xigeenka hore oo shalay u waramayay saxaafadda waxa uu sheegay in cabashada saami qaysbigu soo taagnayd muddo dheer oo 14 sanno ku siman “Wax walba taariikh bay leeyihiin, arrinkani maanta uun muu qalloocan ee wuxuu qalloocday muddo dheer ka hor. Arrintan saami qaybsiga waxaa la isku qabsaday sanadkii 2002-dii markii la doonayay in la qabto doorashada Wakiillada ee 2003 qabsoomi lahayd, dabeedna waa tii xalka la gaadhay ee sidan hadda lagu fadhiyo loo qaybiyay,” ayuu yidhi madaxweyne xigeenka hore.
Isagoo arrintan ka sii hadlaya wuxuu tilmaamay cidda leh eedda habsanka xeerka saami qaybsiga “ Muddada arrintani taagnayd waxaa laga joogaa dhawr iyo toban sanno, saddex qolana khaladka way leeyihiin; golahan wakiillada ee hadda fadhiyaa waxay ahayd inay muddadaas dheer ka shaqeeyaan arrintan, labadii maamul ee kala dambeeyay taayadii iyo tanbana khaladka way leeyihiin oo waxay ahayd in hore loo galo arrintan oo tira koobkii qaranka la sameeyo muddadaas dheerayd may se dhicin,” ayuu yidhi mudane Axmed Yuusuf.
Waxa uu taageeray go’aanka madaxweynuhu dib ugu dhigay doorashada wakiillada, inkasta oo uu tilmaamay inay ahayd inuu toos ugu gudbiyo maxakamadda sare ee dastuuriga ah “Madaxweynuhu hadda go’aan buu gaadhay, astaanta u saraysa uguna dambeysa qarankuna waa madaxweynaha, waxayse ahayd inuu halkii wakiillada uu uga gudbiyay uu toos ugu gudbiyo maxakamadda sare si maxakamadda sarena u laasho ama u ayido,” ayuu yidhi.
Waxa kale oo uu ku taliyay in sida kaliya ee lagu xallin karo saami qaybsiga wakiilladu tahay tira koob qaran oo la sameeyo, kadibna gobol walba dadka iska diwaangaliyay loogu salleeyo inta xildhibaan ee ay helayaan, arrintaasi oo uu tilmaamay inay wakhti dheer qaadanayso. Waxa kale oo uu sheegay in beesha caalamku 2015-tii doorashadii wakiillada soo dhexgashay Somaliland islamarkaana bixisay lacagtii u horaysay “Aftidii dastuurka inagaa bixinay 20011-dii, doorashadii 2002-diina waynu bixinay, tii 2003-diina waynu bixinay laakiin, 2005 doorashii wakiillada ayay beesha caalamku ina soo gashay oo bilawday inay lacag bixiso,” ayuu yidhi madaxweyne xigeenka hore waxaanu xukumadda ku booriyay inay diyaariso kharashka ku baxaya doorashada ee hadda qaadhaan bixiyeyaashu bixiyaan.
Warbixin: Sharci Yaqaan Faaqiday Dacwad Xisbiga Waddani U Gudbiyey Maxkamada Dastuuriga Ah
“Waxa habboonaan lahayd in Waddani u fahmo dawladnimada sida ay tahay, oo aannu u fahmin sida ay isaga kaliya la noqoto..” Maxamed X. Maxamuud
London- Maxamed Xaaji Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday inaanu xisbiga Waddani sharciyan xaq u lahayn dacwad uu ka gudbiyo xukuumada iyo Baarlamaanka, isla markaana tilmaamayso aqoondarada madaxda xisbiga ka haysata nidaamka maamulka dalka.
Maxamed X. Maxamuud oo culuunta siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga adduunka ka bartay jaamacada Warwick, ee carriga Ingiriiska ayaa warbixin dheer oo u faahfaahin kaga bixinayo sharci-darada dacwada xisbiga Waddani iyo qaabka hay’adaha dawlada u wada shaqeeyaan iyo dacwadaha Maxkamada Dastuuriga loo gudbiyo ku bilaabay:
Nin mindi ku weeraray dad wax ka iibsanayay suuq wayn oo ku yaalla gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa la sheegay in uu ahaa Daahir Adan oo ahaa 22 jir arday ah.
Aabihii Axmed Aadan ayaa wargeyska Minneapolis ka soo baxa ee Star Tribune u sheegay in Dahir oo ahaa wiil Soomaali ah uu ku dhashay Kenya balse 15-kii sano ee la soo dhaafay uu ku noolaa Maraykanka.
Wuxuu sheegay in waligii uusan ku tuhmin in uu ku lug lahaa falal xag-jirnimo.
Booliiska ayaa ku wargeliyay Axmed in wiilkiisa la toogtay, kaddib markuu tooriyeeyay sagaal qof.
Ma jirto wax caddaynaya sababtii ku qaaday in uu dadka ku tooriyeeyo magaalada St. Cloud oo 100 km u jirta magaalada Minneapolis.
Kooxda la magac baxday Dowladda Islaamka ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkaasi, waxayna intaas ku dartay in mid ka mid ah askartooda uu weerarkaasi geystay.
Ilaa iyo hadda masuuliyiinta si rasmi ah umaanay xaqiijinin aqoonsiga shaqsigii weerarka gaystay.
Minnesota waxay hooy u tahay Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Maraykanka, Bulshada Soomaalid ayaa si weyn u cambaareeyay falka uu ku kacay Daahir.
Kenya Oo Sheegtay In Maxkamada Ka Garnaqaysa Sohdimaha Badda Aanay Xaq U Lahayn
Kenya ayaa maxkamadda Caddaaladda Dunida ka hor sheegtay in maxkamdaasi oo fadhigeedu yahay magaalada Hague aanay daw u lahayn qaadista dacawadda la xidhiidha soohdinta badda ee kala dhaxeyso Soomaaliya.
Dhagaysiga ayaa khuseeya oo kaliya diidmada ka timid dhinaca Kenya oo ku doodeysa in maxkamaddan aanay awood u lahayn in ay xaliso murankan.
Maxkamadda ayaa marka ay dhageysato doodan labada dhinac waxay go’aan ka soo saari doontaa dalabka Kenya ee ah in maxkmaddu aanay qaadi karin doodan iyo in kale.
Kashmiir: Ciidamada India oo 17 askari lagaga dilay weerar ka dhacay Xaduuda
Maleeshiyaad hubeysan oo ka tirsan kooxaha u dagaalama madax banaanida gobalka Kashmiir ee India maamusho ayaa weerar ku qaaday Saldhiga Ciidamada India ku leeyihiin magaalada Uri ee saaran xadka u dhaxeeya deegaanada ay ka kala taliyaan India iyo Pakistaan ee Kashmiir.
Weerarkan ayaa la sheegay inay fuliyeen afar dagaalyahan kuwaasi oo aroornimadii shalay subax gudaha u galay saldhiga Militariga India xili ay askarta intooda badan hurdeen, waxayna qaraxyo la beegsadeen goobaha ay askarta seexato ee saldhigaasi oo qeyb kamid ah dab la qabadsiiyey.
Kadib waxaa halkaasi ka bilowday iska horimaad muddo saacado ah socday, Taliska Ciidanka India ayaa xaqiijiyey in weerarkan ay uga dhinteen 17 askari, waana weerarkii ugu cuslaa ee ciidamada India lagu qaado in dhawaale.
Gobalka Kashmiir oo u qeybsan labo qeybood ayey kala maamulaan India iyo Pakistaan, gobalkaasi oo dadka degen u badan yihiin muslimiin ayaa in badan oo kamid ah dooneysaa inay helaan madax banaani. Xukuumada India ayaa ku eedaysay dowlada Pakistan inay ka danbeyso abaabulka maleeshiyaadka weerarka kusoo qaaday.
dooda saami qaybsiga ayaa ah mida ugu weyn ee Somaliland wakhtigan haysata, caqabadna ku noqon kara hanaanka diimuqraadiyadeed ee bilaabmay 2001 dibna ugu celin kara nidaamkii beeleed.
mushkilada salkeedu wuxuu yahay is dhex galka dhaqanka iyo siyaasada, oo dhinaca dhaqanka markaynu ka eegno beel kastaaba waxay kuraasta baarlamaanka u aragtaa mid ka turjumaysa cududeeda iyo sharafteeda isla markaana noqonaya waxay ku faanto beeshaasi, oo haddi ay kuraasi yar hesho amaba ay waydo waxay beeshaasi isku arkaysaa mid aan waxbaba ku lahayn Somaliland, maadaama cid iyaga ahi aanuu meesha ugu jirin.
Previous articleBanaan-baxyo Waaweyn Oo Lagu Taageerayo Go’aankii Madaxweynaha ee Kala Qaadista Doorashooyinka oo ka Dhacay Hargeysa Iyo Boorame
Next articleogaysiis ogaysiis: Jaamacada Admas University waxay Ardaydii dhamaysatay Dugsiyada sare iyo Inta Jecel Waxbarasho tayo leh iyo kuwii sanadkii hore aan nasiibka u yeelan kana buuxsantay Jaamacadu ay ka faa’iidaystaan jaaniska isa soo qoraana